5 arrimood oo Farmaajo looga baahan yahay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta 5 arrimood oo Farmaajo looga baahan yahay
5 arrimood oo Farmaajo looga baahan yahay
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxaa horyaallo arrimo badan oo ay ka mid yihiim amniga, musuqa, dowlad wanaagga, iyo abaaraha hadda Soomaaliya saameeyay.
Hadaba haddii aan ku bilowno:
Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullahi Farmaaji, shaqadiisa ugu horeysay ayaa ah inuu soo magacaabo Ra’iisl wasaare asigoo raacaya nidaamka 4.5 oo ah sida qabaa’ilada Soomaaliya ay wax ku qeybsadaan.
Ra’iisul wasaarahaas ayaa magacaabi doono gole wasiiro oo ka dib baarlamaanka ay ansixindoonaan. Halkaas ayeyna shaqada uga billaabaneysaa.
Farmaajo oo noqday madaxweynaha Soomaaliya
Farmaajo wuxuu ballan qaaday inuu soo dhisayo xukuumad fulisa barnaamijkiisa siyaasadeed ee ku saleysan “Nabad iyo Nolol”.
Sida hay’adaha gargaarka ay sheegeen, Soomaaliya waxaa ka jirto cunno yari daran, deegaano badanna waxaa saameeyay abaarta.
Malaayiin qof ayaa macluul qarka u saaran, ka dib saameynta abaartaha. Waxa ugu badan ee dadka ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah biyo, cunto iyo daawo.
Gabay ku saabsan abaaraha oo ay tirisay abwaanad Koos Jamac Dhunkaal
Roobabkii deyrta ayaanan si wanaagsan uga di’in Soomaaliya, taas oo sii xumeysay xaaladda macluusha iyo gaajada oo si ba’an u saameysay caruurta.
Hadaba waxaa madaxweynaha cusub laga sugayaa sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadka ay abaarta ku hayso qeybo kala duwan oo Soomaaliya ah.
Xilliguu uu ololaha ku jiray Farmaajo wuxuu sheegay in “Nolosha Soomaalida ay aad u liidato”.
“Waxaa nalagu tilmaamaa wadanka ugu faqrisan. Waana wadanka ugu qanisan marka la fiiriyo khayraadka dabiiciga ah”. ayuu yiri.
Musuqa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ragaadiyay Soomaaliya, sida lagu xusay warbixin dhowaantan uu soo saaray urur ka shaqeeya la dagaallanka musuqmaasuqa.
Warbixintaas ayaa lagu xusay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu musuqa badan dunida.
Waxaa sidoo kale jiray eedo la xiriira in doorashada Soomaaliya ka dhacday ay musuq iyo wax isdabamarin hareysay.
Hannaanka doorashada ayaa la sheegay inuu musuq hareeyayLahaanshaha sawirkaAMISOM
Hannaanka doorashada ayaa la sheegay inuu musuq hareeyay
Balse, Farmaajo ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo musuqmaasuqa, xilligii uu ku jiray ololaha doorashada.
Wuxuu dalalka deriska la ah Soomaaliya ku eedeeyay inay faraha kula jireen hannaanka doorashada.
“Dalkaan beec ma’ahan, dadkiisuna beec ma’ahan”, ayuu yiri Farmaajo xilligii uu baarlamaanka la hadlaayay, doorashada ka hor.
Wuxuu hadalkaasi ula jeeday in doorashada la musuqayo, dowlado kalena ay ka dambeeyeen.
Daawo: ‘Musuq iyo handadaad’ hareeyay doorashada Soomaaliya
Xilligii uu ra’iisul wasaaraha ahaa ayaa wuxuu sheegay inuu is bedel ku sameeyay qeybaha dhaqaalaha, uuna mushaar u qoray shaqaalaha dowladda iyo xildhibaanada.
Sugidda amniga waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee madaxweynaha cusub uu wajahayo.
Dowladda waxay dagaal kula jirtaa Al-shabaab oo deegaano badan ka maamula Soomaaliya. Dhowaanahan ayey sidoo kale Shabaabka qabsadeen magaalooyiin hor leh oo ciidamada Itoobiya ay baneeyeen.
Farmaajo ayaa u arka in ay jiraan caqabado hor taagan in amniga dalka la sugo.
“Mushaarka ciidamada waa inaan loo arag hadiyad ee loo arkaan xaq ay leeyihiin. Waddo la xiraayo ma jirayso. Markaan Shabaab ka adkaano ayaan baabuurta ku raaxeysaneynaa.” ayuu yiri xilli uu baarlamaanka la hadlaayay ka hor doorashadii maanta.
”Dalka wuxuu ku jiraa xaalad dagaal, laakiin ma moodid in dowladda ay dagaal ku jirto. Dagaalka wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac. Shabaab baa wax weerarta, dowladdana waxay haysaa oo keliya tacsi iyo cambaareyn.”
Wuxuu sheegay in ciidamada ay daryeel heli doonaan si ay amniga wax uga qabtaanLahaanshaha
Wuxuu sheegay in ciidamada ay daryeel heli doonaan si ay amniga wax uga qabtaan
Wuxuu wacad ku maray, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, in dagaalka uu noqdo laba geesood. ”Waan isu tageynaa, hadey nabad qaataanna way fiican tahay, hadey diidaanna, shacabka, xildhibaanada, dowladda, kulli waan dagaal galeynaa”.
Wuxuu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay u baahan yihiin daryeel si ay u ”dagaallamaan una hantaan amniga dalka”.
Shacabka Soomaalida ayaa la sheegaa inaysan aaminsaneyn dowladihii dalka soomaray. Sidoo kale maamul goboleedyada qaar ayaan dowladda heshiis fiican la ahayn.
Waxaa dowladihii horey u soo maray Soomaaliya lagu eedeeyay musuqmaasuq, iyo inay shaqada dowladda ku koobeen dadka ayaga u dhow.
Wuxuu intaa raaciyay “Barnaamijkeyga siyaasadeed oo aan hal ku dhig uga dhigay Nabad iyo Nolo, Soomaali intaas bey u baahantahay. Nabad ayaan u baahannahay, dad walaalo ah oo isku mid ah baannahay”.
Sidoo kale, Waxaa la sheegaa inay jirto is fahan la’aan dhextaalla shacabka iyo ciidamada, balse Farmaajo wuxuu sheegay: “Ciidamada waxaan siineynaa tababar wadaniyad ah. Waxaan siineynaa tababar ah wadaninimada iyo arrinta ay u dhimanayaan waxa ay tahay”.
Previous articleFarmajo wins Somalis presidential election
Next articlePress Statement Regarding The Presidential Elections In Somalia Held On 8 February 2017